२०७५ पुष ०४, बुधबार
यसकारण फिल्म खेल्न चाहान्नन् मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा (भिडियो सहित)
–चन्द्र घलान हेटौँडा, १३ बैशाख । साधारण पहिरनमा पनि खुल्ने सुन्दर मुहार, मुस्कुराउँदा देखिने सेता दन्तलहर अनि आकर्षक जिउडाल र उचाई, मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ श्रृङखला खतिवडाको सुन्दरताको वर्णन जति गरिन्छ त्यो भन्दा बढी उनको बोल्ने कला र स्पष्ट विचारले मान्छेलाई उनीसँग नजिक बनाउँछ । मिस नेपाल हुनेबित्तिकै आम मानिसको सोचाई हुन्छ ‘अब मिस नेपालले […]
टुटफुट, गुट र लूटको राजनीति छोडेर समाज सेवामा लागेँ : कृष्णराज कोइराला
मकवानपुर २८ चैत । नेपाली समाज चरम राजनीतिका कारण ग्रस्त छ । राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको मानिस विरलै पाइन्छन् । विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमीलाई चटक्कै छोडेर पनि समाजमा राम्रै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, मकवानपुर जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णराज कोइराला । राजनीतिक दलले समाजमा योगदान पुर्याउने अभिप्रायसहित उनी पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध भई लामो समय […]
क्याम्पसमा आँखा जुधाउने पुर्णिमाको मोडलिङमा लोभलाग्दो यात्रा
मकवानपुर, ५ चैत । ‘क्याम्पस पढ्न आउनी, सरले उता पढाउनी हाम्ले आँखा जुधाउनी, चित्त बुझाउनी’ यो चर्चित नेपाली लोकदोहोरी गीत नसुन्ने सायद कमै होलान् । तपाईले यो गीत सुन्नुका साथै यसको भिडियो पनि अवश्य हेर्नुभएको होला । गीतामा एक सुन्दर मोडल कलेज ड्रेसमा आँखा जुधाउनी भन्दै देखा पर्छिन्, उनी चर्चित मोडल पुर्णिमा श्रेष्ठ हुन् । […]
सुनिल गिरी : पढेर होइन, परेर सफल तरुण
सुनिल गिरी, अहिले तरुण दल नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन् । हेटौंडा, ५ घर भएका गिरीको जन्म काठमाडौँमा भएको हो । सामान्य अध्ययन गरेका गिरीले पढेर भन्दा पनि परेर जीवनलाई सफल बनाएका छन् । भन्छन्, अरुको हकमा नपढी केही होला वा नहोला तर मेरो हकमा म परेर सफल भएको छु । मकवानपुरका चर्चित नेता भीमसेन महत […]
सन्तोष चौलागाई युवामाझ एउटा छुट्टै पर्सनालिटी
सन्तोष चौलागाई, एमालेनिकट युवा संघका मकवानपुर अध्यक्ष हुन् । उनी सरकारले उद्यमशील युवा विकासका लागि गठन गरेको जिल्ला युवा समिति मकवानपुरका पनि अध्यक्ष हुन् । हेटौंडा– ११ मकवानपुर स्थायी घर भएका उनी जतिबेला विद्यार्थी थिए, त्यतिबेलैदेखि अनेरास्ववियूको राजनीतिमा थिए । अनेरास्ववियूको राजनीतिमा लागेदेखि अहिलेसम्म थुप्रै आरोह अवरोह खेपेका छन् । जटिल परिस्थिति पनि आए, सजिला […]
– कविता उपाध्याय लिबाङ, रोल्पा, ४ फागुन । दशवर्षे सशस्त्र युद्धका बेला देश र जनताको मुक्तिका लागि भन्दै बन्दुक बोकेर हिँडेका सुकिदह–३, जिनाबाङ, रोल्पाका लोकमान वली हिजोआज रोल्पामा उत्कृष्ट बाख्रापालक कृषक बन्नुभएको छ । “बाख्रासँग खेल्दाको मजा नै बेग्लै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । बाख्रा पालनबाट वलीको दैनिकी मात्र फेरिएको छैन जीवनस्तरमा पनि नौलो आयाम थपिएको […]
१८ पटक प्रहरी हिरासतमा बसेका डोरमणि पौडेलको मुख्य मन्त्रीसम्मको ऐतिहासिक यात्रा
-चन्द्र घलान मकवानपुर, २९ माघ । संघीय नेपालका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सोमबार ३ नम्बर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । सरकारले टाउकोको मुल्य समेत तोकेका पौडेलको ऐतिहासिक यात्रा भने त्यति सहज छैन । नेपाल नगरपालिकाका संघको २०५४ सालदेखि हालसम्म अध्यक्ष रहेका पौडेल तत्कालिन हेटौंडा नगरपालिकाको बि.सं. २०४८ र २०५४ मा निर्वाचित मेयर […]
१३ औं पटक जिल्ला प्रथम भएको आधुनिक माविको रहस्य यस्तो
-सन्देश थिङ मकवानपुर, २२ माघ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित आधुनिक राष्ट्रिय मावि मकवानपुरमा भएका विद्यालयहरु मध्येमै नमुना विद्यालयको रुपमा स्थापित भईरहेको छ । सरकारी विद्यालय भएरपनि शैक्षिक क्षेत्रमा पटक पटक उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल हुने उक्त विद्यालय मकवानपुरका अन्य विद्यालयहरु भन्दा छुट्टै पहिचान बनाउँदै स्थापित भईरहेको छ । वि.सं.२०७३ सालको […]
जन्म र मृत्यु हर मानिसको जीवन हो । जसले आफ्नो निजी स्वार्थ त्याग्दछ, समाजको भलाईमा काम गर्दछ, राष्ट्र र समाजको हितमा सोच्दछ, एक मानवले अर्को मानवमा गरेको शोषण विरुद्ध डटेर मुक्ति अभियानमा लाग्दछ त्यस्ता मानिसको मृत्यु नै सगरमाथाभन्दा उच्च,महान, अटल र अमर हुने गर्दछ । त्यस्तो असल,अटल र अमरत्वको शान र पहिचान भएको व्यक्तित्वहरु मध्ये […]
चर्चामा १६ वर्षीय मेन्जमको कुस्ती कला
मकवानपुर २७ पुस । भैंसेपाटीमा जन्मिएकी मेन्जम तामाङ अहिले १६ वर्षकी भईन् । सानै उमेरमा कुस्ती कलामा निपुण मेन्जमले अमेरिकामा भएका विभिन्न कुस्ती प्रतियोगिताहरुमा सफलता प्राप्त गरेकी छिन् । आफ्नो अदभुद कुस्तीकलाको कारण उनले अमेरीकामा रहँदा कहिल्यैपनि पराजय व्यर्होनु परेन । उनी सानैदेखि नै कुस्तीमा जित्दै गईन् । उनको कुस्ती कलाका कारण पिता शुरेस तामाङ र […]
समाज सुधारको बाटोमा संग्रामको पाईला
मकवानपुर, ५ पुस । हेटौंडा जेसिजका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष संग्राम बल लामाले आफ्नो सम्पुर्ण कार्यकाल समाज सुधारका लागि लगाउने बताएका छन् । हेटौंडा जेसिज बिषेश गरी युवा लक्षित समुह भएकोले आफुले कार्यकालभरी युवा विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्नुका साथै कुलतमा लागेका युवाहरुलाई कुलतबाट छुटाउनको लागि पहल गरी समाज सुधार गर्ने बाटोमा अग्रसर हुने बताए । आफु नयाँ […]
रोकिएन चुनावमा बालबालिका प्रयोग, दलसंग मागियो प्रतिवद्धता
शिव चौलागाईं मकवानपुर । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा निर्वाचनका बेलामा कुनै पनि बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ को तेस्रो संशोधन २०७४ मा बालबालिकासंग प्रत्यक्ष संशोधित बुँदा नम्बर ४ (ड) मा उल्लेखित ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न गराउँन नहुने’ प्रावधान छ । तर निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगमा […]
–नारायण ढुँगाना रत्ननगर, चितवन, ६ मंसिर । ‘नेताले मात्रै हुँदैन, विश्व बदल्ने शक्ति युवा शक्ति नै हुन् । तिनै युवा शक्तिले साथ दिनुपर्छ । संसारका ठूला विद्रोह र आमूल परिवर्तनीय क्रान्ति युवा शक्तिले नै भएको छ ।’ मञ्चमा उक्लिएर यति भनेपछि खाली समयको सदुपयोग गर्दै जनवादी गायक खुसीराम पाख्रिनले प्रगतिशील गीत गाउन थाल्नुभयो । युवाहरु […]
‘युवालाई अगाडि बढाउँछु’–नारायण सापकोटा
मकवानपुर, १ मंसिर । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल मकवानपुरबाट प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ क कोे प्रदेश सभा सदस्य पदमा नारायण सापकोटाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । साथै उनी युवालाई स्वरोजगार र राष्ट्रलाई समृद्धि बनाउने अभियानमा घरदैलो गर्न ब्यस्त छन् । वि.सं. २०३८ सालमा जन्मिएका सापकोटाका बाबु हरिप्रसाद सापकोटा र आमा […]
12Newer >>